Ma vie en abondance | IREO FOMBA TSOTRA HAMPAHOMBY NY FIAINANAO
IREO FOMBA TSOTRA HAMPAHOMBY NY FIAINANAO AMIN’NY 2018
1. Avelao ny lasa homba ny lasa (and 18)
« Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha » (and19).
Izany hoe Aza avela hamotika ny ankehitrininao izay zavatra efa lasa tany. Satria ny lasa dia tsy azo ovàna intsony. Saingy azonao handraisana lesona ireny hanatsarana ny ho avy.
Raha ohatra ka nahatsapa ianao fa nisy tsy nety ny nataonao tamin’iny 2017 iny, na nisy asa tokony natao fa tsy vita, Aza manamelotena intsony, fa mamelà ny tenanao. Satria Andriamanitra aza tsy nanameloka anao intsony rehefa tapak’hevitra ny hiova ianao manomboka izao. Fa Andiamanitra be fitiavana sy mamindra fo Izy ka mamela ny helokao rehetra.
Raha misy olona nanao ratsy anao na heverinao fa nisompatra anao tamin’iny 2017 iny, dia mamelà ny helony fa ny famelan-keloka no manatsara sy mampahomby ny ho avinao.
2. Aza manahy ny amin’ny ampitso (and 19)
« Indro, Izaho efa hanao zava-baovao » (and 19).
Izany hoe: tsy ny ratsy tamin’ny lasa akory no hamaritra ny ampitsonao, fa efa eo am-pelatanan’Andriamanitra ny ho avinao, ary fiainana vaovao tsy mbola niainanao no atolony anao. Koa aza idirana intsony fa adidiny izany. Aza miasa saina amin’ny zavatra tsisy idiranao na izay zavatra tsy azonao ovàna.
Fa apetraho amin’ny Tompo ny ho avinao dia aleo Izy no hisahirana hihevitra izay mahasoa anao. Fa hoy i Jesoa hoe: « Ary iza moa aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza. » (Mat 6:27)
3. Mahaiza mankasitraka sy mifaly amin’ny anio
Misy fanazarana tsotra azo atao mba hampilamina sy hanatsara ny fiainanao ka hiova ho fiainana mahafinaritra hatrany. Amin’izao faran’ny taona izao dia manaova tamberina kely hoe: Inona avy ireo zavatra nahafinaritra sy nahafaly anao tamin’iny 2017 iny dia isaory an’Andriamanitra izany. Isaory an’Andriamanitra satria,na betsaka aza ny olana, tao ny mangidy niaiana tamin’iny taona iny, tena mbola nisy nafinaritra sy nahafaly ihany koa.
Ary iaino indray ny fifaliana niaiananao tamin’izany. Dia ho hitanao fa tsy mangidy sy mahasorena daholo akory no niainana tamin,ny taona 2017 fa nisy nahafinaritra sy nahafaly ihany koa. Ary raha ataonao fiainana isanandro aza io dia hilamina sy hihatsara isanandro koa ny fiainanao.
Ankoatr’izay, io zava-miseho anio io mihitsy no ifalio sy ankasitraho an’Andriamanitra. Na dia mety misedra olana aza ianao amin’izao ora izao, ankasitraho hatrany Andriamanitra satria mbola omeny hery hafahanao miatrika izany olana sy zava-tsarotra izany ianao. Raha ao anatin’ny fifaliana rahateo ianao mahaiza mankasitraka an’Andriamanitra amin’izany.
Aoka tsy ny alahelo sy ny olana tamin’ny lasa na ny fanahiana ny ho avy no hanimba ny fahasambaranao anio. Fa atreho amim-pifaliana ilay andro sy fotoana nomen’ny Tompo anao anio fa andro tsara indrindra io. Fa hoy Isaia Mpaminany hoe: « Aza mahatsiaro ny lasa na misaina ny taloha ». Isa 43:18. Fanampin’izany dia hoy i Jesoa hoe: « Ary aza manahy ny amin’ny ampitso ianareo fa ny ampitso hanahy ny azy » Mat 6:34.